Izibalo zabantu ze Martech Zone | Martech Zone
Izibalo zabantu ze Martech Zone
NgoMgqibelo, Ephreli 10, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Ungahle uqaphele ukuthi besisebenzisa i- I-Crowdscience inhlolovo kubhulogi isikhashana manje. Ngiyethemba uthathe isikhathi sokuphendula izinhlolovo - imiphumela iyamangalisa. Nawa amaphuzu avelele:
Abafundi abangama-62.5% abaphothule ekolishi, 21.9% banayo iziqu eziphothule
Abafundi abangama-51.6% ngisebenza ngokugcwele, 32.3% kukhona Ngiyazisebenza.
Iningi labafundi linjalo abathatha izinqumo noma ube nethonya:
Abafundi bavela izinkampani zabo bonke osayizi:
Iningi labafundi linjalo abaphathi abakhulu noma abaholi ezinkampanini zabo.
Iningi labafundi liku- 34 kuya ku-44 weminyaka yobudala.
Abafundi abangama-56.3% bane- umbono ongemuhle emnothweni.
Iningi labafundi lenza ngaphezulu kwama- $ 75k, nokuningi ngaphezulu kwe- $ 150k.
Iningi labafundi lisebenzisa i-Intanethi ngaphezu kwamahora angama-24 ngesonto, nengxenye eyodwa kwezintathu kwamahora angama-36 ngeviki.
Mhlawumbe okuthakazelisa kakhulu kwakuyizimo ezithile maqondana nosomabhizinisi - abangaphezu kwengxenye yabafundi bathi babenentshisekelo kukho ukuqala ibhizinisi labo kanye / noma ukushintsha imisebenzi nemisebenzi. Njengosomabhizinisi oshayelayo (aka - umfana othanda ukuqhamuka kusuka enseleleni eyodwa kuya kokulandelayo), lokhu bekungithakazelisa. Ngokuhamba kwesikhathi, kungaphakamisa ukuthi ngidonsela abafundi abanomqondo ofanayo kubhulogi.
Lezi zibalo zabantu zilapho ngqo engingathanda ukuthi ibhulogi ibe njengendaba yethonya nokusetshenziswa!
Tags: ukubalwa kwabantuifemu
Ngo-Apr 10, i-2010 ku-11: 36 AM
Kuyathakazelisa futhi siyabonga ngokwabelana ngolwazi nethuluzi! Idatha yomfana wedatha!
Jabulela kanye nokuzihlonipha okuhle,